September 27, 2019 - Myitter
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးနှင့်ရင်နာစရာဇတ်လမ်းတစ်ပုဒ်.. သိန်းသုံးဆယ်လောက်ကျမယ်။ နှစ်ဆဲ့ရှစ်နဲ့လုပ်ပေးမယ်တဲ့။(ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးပေါ်ကဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်) ကျွန်တော်ကိုတစ်ခုလောက်ဒီစာလေးကိုရှယ်ပေးစေချင်တယ်။ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံအမေဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် နှင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတ တို့ထံသို့… ဒီအဖြစ်ကိုကျွန်တော်ရေးဖို့စဉ်းစားတိုင်းသူတပါးကို ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးနဲ့ပြန်လည်တွေးပေးမိပါတယ် ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုမှမအားတာကတကြောင်း.. တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်တွေးမိတိုင်းစိတ်ထဲမှာ ကျွန်တော့်အကို ကို လက်လွတ်စပါယ်လုပ်လိုက်သောသူများအကြောင်းတွေးမိတိုင်းမဖြေဆည်နိုင်ဖြစ်နေရပါတယ်။နောင်လာနောက်သားများလည်းဒီလိုအဖြစ်မျိူးမဖြစ်စေချင်ပါ။ အဖြစ်ကဒီလိုပါ ကျွန်တော့်အကိုနာမည်က ရန်နိုင်ထွန်း ပါ။နှလုံးအဆို့ကျဉ်းလို့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး မှာတက်ရောက်ကုသခဲ့ပါတယ် ။ OPT ပြနေတာကတော့2နှစ်နီးပါးတော့ရှိပြီ။အဲ့တာနဲ […]
MOBILE LEGEND HERO နဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ပုဂံရောက် Sinon Loresca
MOBILE LEGEND HERO နဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ပုဂံရောက် Sinon Loresca ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံရဲ့ King Of Catwalk လို့ လူသိများတဲ့ Sinon Loresca ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကို ဒုတိယအကြိမ်မြောက် လာရောက်လည်ပတ်ပြီး ပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။ ပထမအကြိမ်လာရောက်လည်ပတ်စဉ်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖော်ရွေမှုကို မြည်းစမ်းမိသွားတဲ့ […]
Congratulations: နာမည်ကြီး ကနေဒါ ကြက်တောင်မယ် ကို အနိုင်ယူကာ အကြိုဗိုလ်လုပွဲ တက်ရောက်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ သက်ထားသူဇာ
ဒီကနေ့မှာ ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့တဲ့ Maldives International Challenges ပြိုင်ပွဲရဲ့ ကွာတားဖိုင်နယ် အဆင့်ပွဲစဉ်မှာတော့ မြန်မာ ကြက်တောင်မယ် သက်ထားသူဇာဟာ နာမည်ကြီး ကနေဒါ ကစားသမား ဘရစ်နီ တန် ကို အနိုင်ယူပြလိုက်ကာ ၊ ဆီမီးဖိုင်နယ် အဆင့်ကို တက်ရောက်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘရစ်နီ […]
ထိုင်းမြောက်ပိုင်းတွင် ညပိုင်း အုပ်စုဖွဲ့ရန်ရှာနေကြသည့် မြန်မာလူငယ် ဂိုဏ်းဝင်များအား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ လိုက်ဖမ်းဆီးနေ
ထိုင်းမြောက်ပိုင်းတွင် ညပိုင်း အုပ်စုဖွဲ့ရန်ရှာနေကြသည့် မြန်မာလူငယ် ဂိုဏ်းဝင်များအား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ လိုက်ဖမ်းဆီးနေ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ ချင်းမိုင်ခရိုင်က စံစိုင်းနဲ့ဒွိုင်စကက်မြို့ နယ်တွေမှာ သူတို့ ကိုယ်သူတို့ ” ဖီရဒန် ” ဂိုဏ်းလို့နံမည်ပေးထားတဲ့ မြန်မာနွယ်ဖွားရှမ်းတိုင်းသား လူငယ် […]
မအိပ်တဲ့ကလေးတွေကို အပ်နဲ့လိုက်ထိုးတဲ့ မူကြိုဆရာမရဲ့ ယုတ်မာမှုကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့
မူကြိုဆရာမ/နေ့ကလေးထိန်း အလုပ်ကို လုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကလေးချစ်တတ်တယ်၊ ကလေးတွေကို ဘယ်လို ထိန်းကျောင်းရမလဲဆိုတာကို သိတယ်၊ ကလေးတွေကို ပြုစုထိန်းသိမ်းရတာကို ပျော်တဲ့ဆိုတဲ့ လူတွေသာ လျှောက်သင့်ပါတယ်။ တစ်ချို့က ဝါသနာတွေဘာတွေထက် ငွေရလို့ ဝင်လုပ်ကြပါတယ်။ ငွေရလို့ ဝင်လုပ်ကြသူတွေဟာ အလုပ်အပေါ်မှာ စေတနာထားဖို့ဆိုတာ မသေချာပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း အခုလို […]
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ ပတ်သက်လို့ “လုံးဝမရိုက်ပါနဲ့” လို့ အကြံပေးချင်တယ်ဆိုတဲ့ ဦးဝင်းဖေ
ဦးဝင်းဖေ ပြောတာ သဘောကျတယ်။ ဦးကြည်စိုးထွန်းက ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာများအကြံပေးချင်ပါသလည်းလို့မေးတယ်။ ဦးဝင်းဖေက တစ်ကယ်ဖြေရမလားတဲ့ . . . .ဟိုကလည်းဖြေပါပေါ့ . . . .တစ်ခွန်းထဲ ဖြေသွားတယ် လုံးဝမရိုက်ပါနဲ့တဲ့ . . . . ဦးကြည်စိုးထွန်းက ထပ်မေးတယ် […]
ဆရာတော်တစ်ပါး သုဿန်ဓုတင်ဆောင်စဉ် ကြုံခဲ့မြင်ခဲ့ရသော တုန်လှုပ်ခြောက်ခြား သံဝေဂရဖွယ်ရာ နှောက်ယှက်ကြသော သရဲတစ္ဆေ နာနာဘာဝများ . . . . . (ဖြစ်ရပ်မှန်) မကျွတ်မလွတ်ကြဘဲ တစ္ဆေသရဲ နာနာဘာဝ အဖြစ်ဖြင့် သုသာန်တိုင်းမှာ ပုံသဏ္ဍာန် အမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြတာကို မြောက်ဦးဆရာတော် ဝက်ဆိုက်တွင် သံဝေဂယူကြဖို့ ဖေါ်ပြပေးထားသည်ကို […]
သားနှစ်ယောက်၏ နစ်နာမှုများကြောင့် တရားစွဲရတာပါဆိုတဲ့… ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်
သားနှစ်ယောက်၏ နစ်နာမှုများကြောင့် တရားစွဲရတာပါဆိုတဲ့… ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင် ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်က ဗစ်တိုးရီးယား အမှုက အဖေနဲ့ မိသားစု၊ နှစ်ဖက် ရှေ့နေတွေနဲ့ မိသားစု မိတ်ဆွေ ဆရာဝန်ကို အမှုဖွင့် နေပြည်တော် Wisdom Hill မူကြိုကျောင်း ကြီးကြပ်ရေးမှူး ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်က ဗစ်တိုးရီးယားအမှုမှာ ပါဝင် ပတ်သက်နေသူ နှစ်ဖက်ရှေ့နေတွေ၊ […]